Home News Ururka Al Shabaab oo isaga baxay Degmada Xarar-dheere
Ururka Al Shabaab oo isaga baxay Degmada Xarar-dheere
Wararka ka imaanaya Degmada Xarar-dheere ee Gobolka Mudug ayaa sheegaya in Al-shabaab ay isaga bexeen degmadaasi, kadib markii ay sii kordheen diyaaradaha dagaalka ee duqeymaha ka fulinaya Gobalkaasi.
Dadka Deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalamayaasha Al-shabaab ay halkaasi isaga bexeen,waxaana cidlo ah Saldhiga iyo xarunta Degmada, maadaama halkaasi ay ku lahaayeen Fariisimo.
Ka bixitaan Al-Shabaab ee Degmada xarar-dheere ayaa waxaa loo sababeeyey in ay dulqaadan waayeen duqemaha ay diyaaradaha Mareykanka ka fuliyaan Deegaanada ka tirsan Goballka Mudug.
Mudo ku dhow 10 Sano ayay maamulayeen Al-Shabaab degmada Xarar-dheere ee Gobalka mudug, iyadoona intaasi dhibaatooyin u geysan jiray dadka Shacabka ah ee ku nool degmadaasi.
Previous articleGuddoomiye kuxigeenka Gobolka Baay oo ka digay in qalalaaso Siyaasadeed ay ka dhacaan Magaalada Baydhabo
Next articleNisa oo shaacisay in gacanta lagu dhigay Sarkaal sare oo katirsan Ururka Al Shabaab
Odaayasha Beesha Waceysle oo Ku Dhawaaqay in Ay ka Baxeyn Maamulka...
Eedeeyn Culus oo loo jeediyay midowga Yurub!!